Ubuntu 22.04 i-Jammy Jellyfish iya kusebenzisa i-GNOME 42, kodwa i-GTK4 encinci | Ubunlog
Ubuntu 22.04 iJammy Jellyfish iya kusebenzisa i-GNOME 42, kodwa i-GTK4 encinci
Ngo-Epreli ka-2021, iCanonical yakhupha Ubuntu 21.04 kwaye kwabakho impikiswano encinci okanye isihloko sencoko. Inkampani eqhuba iMartk Shuttleworth yayicinga ukuba i-GNOME 40 kunye ne-GTK4 ziluhlaza kakhulu, ke bahlala ne-GNOME 3.38 efanayo eyayisele isebenzisa inguqulelo ekhutshwe kwiinyanga ezintandathu ngaphambili. Ngo-Okthobha ophelileyo sele befake i-GNOME 40, kodwa i-GNOME 41 yayisele ikhona.Kwakwaziwa ukuba inkqubo yokusebenza enika igama layo kule bhlog yayiza kutsiba inguqulelo ye-GNOME, kwaye loo mzuzu unokuza ngokusungulwa kwe Ubuntu 22.04.
Ubuntu 22.04 iya kuba yikhowudi ebizwa ngokuba yiJammy Jellyfish, kwaye iya kuba yinto Inguqulelo yeLTS. Nangona sinesavenge esitsha rhoqo emva kweenyanga ezintandathu, ezona zibalulekileyo zezo zikhutshwa ngo-Epreli weminyaka enokubalwa, kwaye kukwezo apho iCanonical izisa olona tshintsho lubalulekileyo. Ke leliphi ixesha elingcono lokubuyela ekusebenziseni inguqulelo yamva nje ye-GNOME kuno-Epreli olandelayo.
Ubuntu 22.04 iza kufika ngo-Epreli 2022
GNOME 42 Isaphuhliswa ngoku, kwaye iza kukhupha inguqulelo yayo ezinzileyo ngoMatshi. Iya kuyilwa ukuba ilingane ngokugqibeleleyo nayo GTK4 kunye noguqulelo lwamva nje lwe libadwaita, kodwa uyakungena kwingxaki encinci ukuba eli xesha ayinanto yakwenza neCanonical.
Iprojekthi ye-GNOME ngoku isebenza kwizinto ezininzi ezintsha, kwaye uninzi lwayo lunxulumene ne libadwaita kunye GTK4. Ke, Ubuntu 22.04 buya kusebenzisa inguqulelo yamva nje ye-GNOME, kodwa bekuya kubakho usetyenziso oluninzi olungasayi kuphinda lusekwe kwi-GTK4. Kwakhona siya kuba nephazili ekufuneka inyanzeliswe ukuba idibane; ukuba kunyaka ophelileyo bendinazo iiapps ezivela GNOME 41 kodwa iShell yahlala ku-3.38, ngalo April yayiza kufakwa kwi-GNOME 42, kodwa izicelo ezininzi ziya kuqhubeka nomfanekiso we-GTK3.
Ngokuphathelele ezinye zeendaba esiza kuzibona kwi-Jammy Jellyfish, ndingagqamisa ngokwam ukupheliswa kombala we-aubergine kunye nesixhobo esitsha sesikrini esiya kukuvumela ukuba urekhode idesktop kwividiyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Ubuntu 22.04 iJammy Jellyfish iya kusebenzisa i-GNOME 42, kodwa i-GTK4 encinci
QPrompt, umthombo wasimahla kunye ovulekileyo weTeleprompter